Shiinaha Nidaamka ceeryaanta biyaha ee cadaadiska sare-FM-ka oo la ansaxiyay (1) warshad iyo alaab-qeybiyeyaal. Anbesec
Nidaamka ceeryaanta biyaha cadaadiska sare-FM la Ansixiyay (1)
Uumiga Biyaha waxaa lagu qeexaa NFPA 750 inuu yahay buufis biyo ah oo Dv0.99, loogu talogalay qulqulka culeyska wadnaha ee isu-uruurinta dhibcaha biyaha, uu ka yar yahay 1000 mikroon ugu yaraan naqshadeynta naqshadeynta ugu yar ee qiiqa ceelka biyaha. Nidaamka ceeryaanta biyuhu wuxuu ku shaqeeyaa cadaadis sare si uu u gaadhsiiyo biyaha sidii ceeryaamtii atomku fiicnayd. Ceeryaamadan ayaa si dhakhso ah loogu beddelaa uumis dab qabadsiiya kana celiya oksijiin dheeraad ah inay gaarto. Isla mar ahaantaana, uumi baxa wuxuu abuuraa saameyn qaboojiye oo weyn.
Mabda'a ceeryaanta Biyaha
haa Qulqulka Biyaha waxaa lagu qeexaa NFPA 750 inuu yahay buufin biyo ah oo ay Dv0.99, Isugeynta miisaanka isku-darka ee isu-uruurinta dhibcaha biyaha, waa in ka yar 1000 mikroonno ugu yaraan naqshadeynta naqshadeynta ugu yar ee biiyaha ceeryaanta biyaha. Nidaamka ceeryaanta biyuhu wuxuu ku shaqeeyaa cadaadis sare si uu u gaadhsiiyo biyaha sidii ceeryaamtii atomku fiicnayd. Ceeryaamadan ayaa si dhakhso ah loogu beddelaa uumis dab qabadsiiya kana celiya oksijiin dheeraad ah inay gaarto. Isla mar ahaantaana, uumi baxa wuxuu abuuraa saameyn qaboojiye oo weyn.
Biyaha waxay leeyihiin waxyaabo si fiican u dhuuqa kuleylka 378 KJ / Kg. iyo 2257 KJ / Kg. si loogu beddelo uumiga, oo lagu daro qiyaastii 1700: 1 ballaarinta sidaas. Si looga faa'iideysto astaamahan, aagga dusha sare ee dhibcaha biyaha waa in la wanaajiyaa oo waqtiga ay sii marayaan (ka hor inta aan la garaacin dusha sare) la weyneyn karo. Marka sidaas la samaynayo, xakamaynta dabka dabka ololaya dusha sare waxaa lagu gaari karaa isku dhaf ah
1. Soosaarida kuleylka dabka iyo shidaalka
2. Hoos u dhigida oksijiinta ee uumi kuleylka kuleylka ololka hore
3. Joojinta wareejinta kuleylka dhalaalaya
4. Qaboojinta gaasaska gubashada
Si dabku u noolaado, wuxuu ku tiirsan yahay jiritaanka saddexda cunsur ee 'saddexagalka dabka': oksijiinta, kuleylka iyo waxyaabaha guban kara. Ka saarida mid ka mid ah astaamahan ayaa daminaysa dabka. Nidaamka ceeryaanta biyaha cadaadiska sareeyo ayaa intaas ka sii dheer. Waxay weeraraysaa laba cunsur oo ka mid ah saddexagalka dabka: oksijiin iyo kuleyl.
Dhibco aad u yar oo ku jira nidaamka ceeryaanta biyaha cadaadiska sareeyo ayaa si dhaqso leh u soo dhuuqa tamar aad u badan taasoo dhibcaha ka soo baxa uumi baxaan ugana beddelaan biyaha uumi, sababtoo ah aagga sare ee dusha sare ee la xiriira tirada yar ee biyaha. Tani waxay ka dhigan tahay in dhibic kastaa ay ballaadhi doonto ugu yaraan 1700 jeer, marka ay u soo dhowaato waxyaalaha guban kara, halkaas oo oksijiin iyo gaasaska guban kara ay uga soo barakacayaan dabka, taas oo macnaheedu yahay in hannaanka dardargelinta uu sii kordhayo oksijiin la'aan.
Si loola dagaallamo dabka, nidaamka rusheeyaha dhaqameed wuxuu ku fidiyaa dhibco biyo aag la siiyay, kaas oo nuugaya kuleylka si uu u qaboojiyo qolka. Baaxadda weyn iyo dusha sare awgeed, qaybta ugu weyn ee dhibcaha ma soo nuugi doonaan tamar ku filan inay uumi baxaan, waxayna si dhakhso leh dhulka ugu dhacaan sidii biyo. Natiijadu waa saameyn xaddidan oo qaboojin ah.
Taas bedelkeeda, ceeryaanta biyaha cadaadiska sare leh waxay ka kooban tahay dhibco aad u yar, oo si tartiib tartiib ah u dhacaya. Dhibcaha ceeryaanta biyuhu waxay leeyihiin aag ballaadhan oo u dhigma cufkooda oo, inta ay tartiib-tartiib ah ugu sii dhaadhacayaan dhulka, waxay dhuuqayaan tamar badan. Qiyaas aad u tiro badan oo biyo ah ayaa raaci doonta qadka buuxinta oo uumi bixi doonta, taasoo macnaheedu yahay ceeryaanta biyuhu inay tamar badan ka qaataan hareeraha iyo dabkaba.
Taasi waa sababta ceeryaanta biyaha cadaadiska sareyso u qaboojiso si hufan halkii litir oo biyo ah: ilaa todobo jeer ka fiican inta laga heli karo hal litir oo biyo ah oo loo isticmaalo nidaamka damiya dhaqameed.
Qulqulka Biyaha waxaa lagu qeexaa NFPA 750 inuu yahay buufin biyo ah oo ay Dv0.99, Isugeynta miisaanka isku-darka ee isu-uruurinta dhibcaha biyaha, waa in ka yar 1000 mikroonno ugu yaraan naqshadeynta naqshadeynta ugu yar ee biiyaha ceeryaanta biyaha. Nidaamka ceeryaanta biyuhu wuxuu ku shaqeeyaa cadaadis sare si uu u gaadhsiiyo biyaha sidii ceeryaamtii atomku fiicnayd. Ceeryaamadan ayaa si dhakhso ah loogu beddelaa uumis dab qabadsiiya kana celiya oksijiin dheeraad ah inay gaarto. Isla mar ahaantaana, uumi baxa wuxuu abuuraa saameyn qaboojiye oo weyn.
1.3 Hordhaca Nidaamka Ceegare ee Biyaha
Nidaamka ceeryaanta biyaha ee cadaadiska sare waa nidaam dab-demis oo u gaar ah. Biyaha waxaa lagu qasbay iyada oo loo maro nozzles micro at cadaadis aad u sareeya si loo abuuro ceeryaamo biyo leh qaybinta ugu badan ee dhibcaha dab-demiska. Waxyeelada bakhtiiyeyaashu waxay ku siisaa difaac fiican marka la qaboojiyo, kulaylka dartiis awgeed, iyo ku-shubashada sababtuna tahay ballaadhinta biyaha qiyaastii 1,700 jeer markay uumi baxdo.
1.3.1 Qaybta muhiimka ah
Biyo-mareenka ceeryaanta biyaha ee sida gaarka ah loo qaabeeyey
Cadaadiska sare ee ceeryaanta ceeryaanta biyaha waxay ku saleysan yihiin farsamada Micro nozzles gaar ah. Foomkooda gaarka ah awgood, biyuhu waxay ku kasbadaan dhaqdhaqaaq adag oo wareegaya qolka wareegga waxaana si dhaqso leh loogu beddelaa ceeryaamo biyo ah oo lagu shubay dabka xawaare sare. Xagasha buufin ballaaran iyo qaabka buufinta ee nozzles micro waxay awood u siineysaa kala dheereyn sare.
Dhibcaha lagu sameeyay madaxyada biiyaha waxaa la abuuray iyadoo la adeegsanayo inta u dhexeysa 100-120 baararka cadaadiska.
Kadib baaritaano taxane ah oo dabka ah iyo sidoo kale tijaabooyin farsamo iyo qalab, suuxdinta ayaa si gaar ah loogu sameeyay ceeryaanta biyaha cadaadiska sareeyo. Dhammaan tijaabooyinka waxaa qaada shaybaarro madax-bannaan si xitaa dalabyada adag ee loogu talagalay xeebta loo fuliyo.
Cilmi baadhis xeel dheer ayaa horseeday abuurista matoorka adduunka ugu fudud uguna cufan. Bambooyin waa bambooyin bastoolad-axial badan oo lagu sameeyay bir daxal u adkaysta daxalka. Naqshadda gaarka ahi waxay biyaha u isticmaashaa saliid ahaan, taasoo macnaheedu yahay in u adeegidda joogtada ah iyo beddelidda saliidaha aan loo baahnayn. Mashiinka waxaa ilaaliya shatiyada caalamiga ah waxaana loo adeegsadaa qaybo badan oo kala duwan. Bambooyinku waxay bixiyaan ilaa 95% waxtarka tamarta iyo garaaca wadnaha oo aad u hooseeya, sidaas awgeedna waxay yareyneysaa buuqa.
Farsamooyin aad u sarreeya oo keenaya daxal la'aan
Feeleyaasha-cadaadiska-sarreeya waxaa laga sameeyaa birta birta ah oo birta ah oo aad u daxalka-celiya isla markaana u adkaysta wasakhda. Naqshadeynta qaabdhismeedka kaladuwan ee kaladuwan ayaa ka dhigaya filtarka mid aad u yar, oo ka dhigaya kuwo aad u fudud in la rakibo oo la shaqeeyo.
1.3.2 Faa'iidooyinka nidaamka ceeryaanta biyaha cadaadiska sarreeya
Faa'iidooyinka nidaamka ceeryaanta biyaha ee cadaadiska sarreeya aad ayey u badan yihiin. Xakamaynta / deminta dabka ilbiriqsiyo gudahood, iyada oo aan la isticmaalin wax kiimiko ah oo lagu daro iyo isticmaalka ugu yar ee biyaha una dhaw waxyeello biyo ah, waa mid ka mid ah nidaamyada dab-demiska ee ugu habboon deegaanka iyo wax-ku-oolka ah, waana mid gebi ahaanba ammaan u ah aadanaha.
Isticmaalka ugu yar ee biyaha
• Burburka biyaha oo xadidan
• Waxyeellada ugu yar ee dhacda haddii ay dhacdo shil aan shil u dhicin
• Baahi yar oo loo qabo nidaamka waxqabadka hore
• Faa'iidada ay leedahay waajibaadka saaran in biyo la qabsado
• Kaydad dhif ah ayaa loo baahan yahay
• Badbaadinta maxalliga ah ee ku siinaysa dabka degdegga ah
• Waqtiga shaqada oo ka yaraada sababo la xiriira dabka oo hooseeya iyo waxyeelada biyaha
• Khatar la dhimay oo ah luminta saamiyada suuqa, maadaama wax soo saarku si dhakhso leh u socdo oo uu mar kale shaqeynayo
• Kufiican - sidoo kale la dagaalanka dabka saliida
• Hoos u dhig biilasha bixinta biyaha ama canshuuraha
Dhuumaha yar yar ee birta ka sameysan
• Si fudud loo rakibo
• Si fudud loo maareeyo
• Dayactir la'aan
• Naqshad soo jiidasho leh oo ka mid noqoshada fudud
• tayo sare leh
• cimri dheer
• Kharash-ku-fadhiis shaqo ahaan
• Ku dheji riix rakibida si dhaqso leh loogu rakibo
• Way fududahay in meel looga helo tuubooyin
• Si fudud dib loogu dhigo jirka
• Si fudud u laaban
• Qalab yar oo loo baahan yahay
• Awoodda qaboojinta waxay awood u siineysaa rakibidda daaqad muraayad ah oo ku taal albaabka dabka
• Kala dheereynta sare
• Nozzzz yar - qaab dhismeed soojiidasho leh
• Qaboojin wax ku ool ah
• Qaboojiyaha daaqada - wuxuu awood u siinayaa in la iibsado muraayad jaban
• Waqti rakibid gaaban
• Naqshad qurxinta
1. Fasalka FM-ka 5560 - Ansixinta Iskudarka ee Warshadaha ee Nidaamka ceeryaanta Biyaha
2. NFPA 750 - daabacaaddii 2010
2 Qeexida SYSTEM iyo qaybaha ay ka kooban tahay
Nidaamka HPWM wuxuu ka koobnaan doonaa tiro fiyuusyo ah oo ay kuxiran yihiin tuubooyin bir bir ah oo aan lahayn biyo cadaadis sare leh (unugyada bamka).
Qalabka loo yaqaan 'HPWM nozzles' waa qalab saxsan oo injineernimo ah, oo loo qaabeeyey iyadoo ku xiran nidaamka dalabka si loo gaarsiiyo qulqulka ceeryaanta biyaha qaab lagu hubinayo xakamaynta dabka, xakamaynta ama daminta.
2.3 Qaybaha filtarka - Nidaamka biiyaha furan
Qaybaha qaybta ayaa la siiyaa nidaamka dab-demiska ceeryaanta biyaha si loo kala saaro shaqsiyaadka qaybaha dabka.
Fiilooyinka qaybta laga soo saaray birta birta ah ee loogu talagalay qayb kasta oo ka mid ah qaybaha la ilaalinayo ayaa la siiyaa si loogu rakibo nidaamka tuubbada. Qalabka waalka ayaa caadi ahaan xiran oo la furaa marka nidaamka dab-demiska uu shaqeynayo.
Nidaamka waalka qayb ayaa lagu wada ururin karaa noocyo kala duwan oo isku mid ah, ka dibna tuubooyin shaqsiyeed loo rakibayo mashiinnada kala duwan ayaa la rakibay. Fiilooyinka qaybta ayaa sidoo kale la siin karaa iyadoo dabacsan si loogu rakibo nidaamka tuubbada meelaha ku habboon.
Farsamooyinka qaybta waa inay ku yaalliin bannaanka qolalka la ilaaliyo haddii aan kuwa kale lagu tilmaamin heerarka, xeerarka qaranka ama hay'adaha.
Qiyaasta qaybta filtarku waxay ku saleysan tahay mid kasta oo ka mid ah awooda shakhsiyadeed ee qaabeynta.
Farsamooyinka qaybta nidaamka waxaa loo bixiyaa sidii qalab koronto ku shaqeeya. Qaybaha gawaarida lagu shaqeeyo ee matoorrada ah waxay caadi ahaan u baahan yihiin 230 VAC signal hawlgalka.
Waalka ayaa horay loo soo uruuriyay iyada oo ay weheliso cadaadiska cadaadiska iyo faleebada go'doominta. Ikhtiyaarka lagu kormeerayo qalabka go'doominta ayaa sidoo kale la heli karaa iyada oo ay weheliyaan noocyo kale.
2.4 Bamgaree cutub
Unugga matoorka ayaa sida caadiga ah ku shaqeyn doona inta u dhexeysa 100 bar ilaa 140 bar oo leh heerarka qulqulka halbeegga oo hal mitir ah ayaa lagu jaray 100l / min Nidaamka matoorka ayaa ka faa'iideysan kara hal ama in ka badan oo unugyada bamka ah ee ku xiran dhowr nooc nidaamka ceeryaanta biyaha si loo buuxiyo shuruudaha naqshadeynta nidaamka.
2.4.1 Bambooyin koronto
Marka nidaamka la hawlgeliyo, hal bamboo oo keliya ayaa la bilaabi doonaa. Nidaamyada ka kooban hal bamka ka badan, bambooyinku waxay u bilaaban doonaan si isdaba joog ah. Haddii qulqulka uu kordho sababtoo ah furitaanka hawo badan; bamka (yada) dheeriga ah ayaa si otomaatig ah u bilaaban doona. Kaliya bambooyin badan oo lagama maarmaan u ah in la ilaaliyo qulqulka iyo cadaadiska shaqeynaya ee joogtada ah oo leh qaabeynta nidaamka ayaa shaqeyn doona. Nidaamka ceeryaanta biyaha ee cadaadiska sareyso weli wuu shaqeynayaa ilaa shaqaale aqoon leh ama dab damiska ay gacanta ka xidhaan nidaamka.
Unugga bamka caadiga ah
Qeybta bamka waa xirmo isku dhafan oo isku dhafan oo ka kooban shirarka soo socda:
Qeybta kalasooca Taangiyada keydka (Waxay kuxirantahay cadaadiska marinka iyo nooca bamka)
Haanta buux dhaaftay iyo cabirka heerka Taangiga haanta
Biibiile soo noqo (iyadoo laga faa'iideysan karo ayaa loo horseedi karaa marinka) Kaladuwanaansho
Nooc nuugid ah Unugga bamka HP
Mashiinka korantada Cadaadiska kala cayncayn ah
Bamka Pilot Gudiga xakamaynta
2.4.2 Guddi unugga bamgareynta
Xakamaynta gawaarida gawaarida waa sida caadiga ah ee lagu dhejiyo qaybta mashiinka. Qalabka mashiinka mashiinka ayaa loo baahan yahay inuu ahaado FM Approved.
Awood wadaag guud sida caadiga ah: 3x400V, 50 Hz.
Bamka (yada) ayaa toos ugu socda xariiqa loo bilaabay sida caadiga ah. Bilowga-Delta bilowga, bilowga jilicsan iyo soo noqnoqodka bilowga waxaa loo bixin karaa ikhtiyaarro haddii loo baahan yahay dhimista bilowga hadda.
Haddii cutubka bamka uu ka kooban yahay wax ka badan hal bamka, waqti xakameyn ah oo tartiib tartiib ah isugu xiridda bambooyin ayaa la soo saaray si loo helo ugu yaraan xamuul bilow ah.
Gudiga xakamaynta wuxuu leeyahay RAL 7032 dhameystir caadi ah oo leh qiimeyn ilaalin galid ah IP54.
Bilaabidda bambooyinku waxaa lagu gaarayaa sida soo socota:
Nidaamyada qallalan – Laga soo bilaabo xiriir wicitaan bilaa volt ah oo laga helo guddiga xakamaynta nidaamka ogaanshaha dabka.
Nidaamyada qoyan - Laga soo bilaabo hoos u dhaca cadaadiska nidaamka, oo ay kormeerayaan qaybta mashiinka mashiinka mashiinka.
Nidaamka waxqabadka kahor - Ubaahan calaamadaha labadaba hoos u dhaca cadaadiska hawada ee nidaamka iyo xiriir wicitaan bilaash ah oo lagu bixiyo guddiga xakamaynta nidaamka ogaanshaha dabka.
2.5 Macluumaad, miisas iyo sawiro
Waa in taxaddar gaar ah la yeesho si looga fogaado carqaladeynta marka la qorsheynayo nidaamyada ceeryaanta biyaha, gaar ahaan marka la isticmaalayo qulqulka qulqulaya, cabbirka yar yar ee dhibcaha maaddaama waxqabadkooda ay saameyn xun ku yeelan doonto xannibaadaha. Tani badanaa waa sababta oo ah cufnaanta qulqulka waxaa lagu gaarayaa (oo leh qulqulatooyinkan) hawada qulqulaya ee qolka u oggolaanaysa ceeryaanta inay si siman ugu faafto booska - haddii is hortaag uu jiro ceeryaantu ma awoodi doonto inay ku guuleysato cufnaanta qulqulka qolka dhexdiisa maadaama ay isu rogi doonto dhibco waaweyn markii ay isku urursato xannibaadda oo ay faleebo halkii ay si siman ugu fidin lahayd booska.
Baaxadda iyo masaafada ay u leedahay carqaladeynta waxay ku xiran tahay nooca sanka. Macluumaadka waxaa laga heli karaa xaashiyaha xogta ee sanka gaarka ah.
Sawirka 2.1 Biiyaha
2.5.2 Halbeegga bamgareynta
l / daqiiqo
Unugga mashiinka istaandarka ee koontaroolka ku shaqeeya
Miisaanka unugga bamgareynta
Awood: 3 x 400VAC 50Hz 1480 rpm.
Jaantuska 2.2 Qaybta Mashiinka
2.5.3 Shirarka caadiga ah
Kulammada caadiga ah ee waalka ayaa lagu muujiyey hoosta Sawirka 3.3.
Isku-darka waalka ayaa lagu talinayaa nidaamyo qaybo badan ka kooban oo laga quudinayo isla biyo-gelinta. Qaabeynta ayaa u oggolaan doonta qaybaha kale inay sii shaqeeyaan inta dayactirka lagu sameynayo hal qeyb.
Sawirka 2.3 - Qaybta caadiga ah ee isku-xidhka waalka - Nidaamka Tuuboyinka Qalalan ee Furan
Hore: Nidaamka dab-damiska ceeryaanta biyaha cadaadiska sarreeya leh (2.2)
Qalabka Khadka Tooska ah ee NMS2001 Cable
Cadaadiska sare ee ceeryaamta dabka damiya ...